Madaxwayne Xassan oo Talaabo aanu Horey u qaadin Xiligan ku Dhaqaaqay - Hablaha Media Network
Madaxwayne Xassan oo Talaabo aanu Horey u qaadin Xiligan ku Dhaqaaqay
HMN:- Iyadoo magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia ay isku uruursanayaan Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweyninimo ee Somalia, ayaa waxaa hanashada kursiga dartii uu Madaxweynaha wakhtigiisu dhamaaday Xassan Sheekh Maxamuud qaaday talaabo uu ugu ololeynaayo xilka.
Madaxweyne Xassan oo ku haminaaya in mar kale uu hanto xilkaasi ayaa waxa uu markii ugu horeysay noloshiisa ku dhaqaaqay sameysashada Bog Twitter u gaar ah.
Bogaani ayaa waxa uu ugu gol leeyahay inuu kula tacaamulo shacabka si uu uga helo taageero, isagoo halkaasi kusoo bandhiga baahidiisa ku aadan Kursiga.
Bogga cusub ee Madaxweynaha ka sameystay Twitter­ka ayaa la sameeyay bishii hore, waxaana cinwaankiisu yahay @HEhassansheikh.
Bogaani oo noqonaaya kii ugu horeeyay ee uu sameysto Xassan Sheekh, ayaa waxaa la socda tirro dad ah kuwaasi oo u badan keliya taageerayaashiisa.
Madaxweynuhu waxaa uu boggiisa Twitter­ka ku xoojiyay ololihiisa doorasho iyo dadaalka uu ugu jiro in mar kale ku guuleysto Kursiga Madaxtiniada Soomaaliya.